Tag: wada shaqeynta fiidiyowga | Martech Zone
Tag: wada shaqeynta fiidiyowga
Animaker: Is-Is-Adiga Is-Animation Studio, Tifatiraha Fiidiyowga Suuq-geynta, iyo Dhismaha Xayeysiiska Video
Sabtida, Janaayo 23, 2021 Sabtida, Janaayo 23, 2021 Douglas Karr
Fiidiyowga firfircoon iyo tooska ah ayaa lagama maarmaan u ah urur kasta. Fiidiyowyadu aad ayey u mashquulsan yihiin, waxay awood u leeyihiin inay si macno leh u sharxaan fikradaha adag isla markaana ay ku siiyaan waayo-aragnimo muuqaal iyo maqalba leh. In kasta oo fiidiyowgu yahay mid dhexdhexaad ah oo la yaab leh, had iyo jeer lama-koobi karo ganacsiyada yaryar ama suuqleyda sababta oo ah ilaha loo baahan yahay: Fiidiyowga xirfadlaha ah iyo qalabka maqalka ee wax lagu duubo. Xirfadlayaasha codka ee qoraalkaaga. Naqshadeynta xirfadeed iyo animations si loogu daro. Iyo, laga yaabee, kan ugu qaalisan iyo
Iskaashiga Cusub iyo Qalabaynta Isku-xidhka Vimeo Waxay U Sameeyaan Sida Halbeegga Sawir-qaadayaasha
Axad, Febraayo 26, 2017 Jimcaha, Sebtember 29, 2017 Douglas Karr
Mid ka mid ah shirkadaha deriska nala ah dhismaha istuudiyahayagu waa qaar ka mid ah sawir qaadayaasha cajaa'ibka leh, Tareenka 918. Waxay ku takhasuseen keenista qalabkooda meel kasta oo adduunka ah iyo soo saarista fiidiyowyo muuqaal ah. Kaliya maahan tayada shaqada ay soo saaraan taasi waa wax lala yaabo, in kastoo. Waqtigooda intiisa badan waxay ku lumiyaan dhab ahaantii inay horumariyaan sheekada, oo ay u beddelaan muuqaallo, ka dibna ay qorsheeyaan mashaariicdooda si aan fiicnayn. Natiijooyinka ayaa si qoto dheer u fiirsanaya… halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah shaybaarada shirkadooda
Wipster: Dib u Eegista Video iyo Madal Ansixin
Waxaan la shaqeynaynay asxaabteena 12 Xiddig Media (taageerayaal waqti dheer ah iyo saaxiibo!) Fiidiyowga macaamiisha. Waa fiidiyow casri ah, oo ku lug leh intros, outros, b-roll, muuqaal macaamiil, iyo wareysiyo dhammaantood lagu soo koobay wax ka badan 2 daqiiqo. Waxay u direen xiriiriye halka aan ka heli karno fiidiyowga iyada oo loo marayo Wipster, dib u eegis fiidiyoow ah iyo madal oggolaansho. Waa interface aad u macquul ah oo daawade kasta oo midabkiisu u eg yahay isla markaana uu ka faalloon karo goob kasta oo uu doono
Xusuusin: Faahfaahin oo la shaqee Wada-soo-saarkaaga Muuqaalka ah
Remark wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku martiqaado isticmaaleyaasha, iskaashi iyo sharaxaad ka sameyso fiidiyowyadaada. Waxaad isticmaali kartaa fiidiyahaaga jira ama adeegyada martigelinta sida Vimeo, Dropbox, Box, Youtube. Qof kastaa wuxuu ka shaqeeyaa xiriir gaar ah, oo gaar ah, oo awood kuu siinaya inaad wadaagto oo aad si toos ah uga bixiso jawaab celinta kooxdaada ama macmiilkaaga iyadoon loo baahnayn xisaab. Jawaab celinta waxaa lagu soo ururiyey shaashadda fiidiyowga ee lagu shaabadeeyey qolka daawashada. Waxaad u dhoofin kartaa qoraalada si toos ah barnaamijka tafatirka fiidiyowgaaga
WeVideo: Tafatirka Fiidiyowga Tooska ah iyo Wadashaqeynta
Monday, August 19, 2013 Jimcaha, Sebtember 25, 2015 Douglas Karr
WeVideo waa barnaamij softiweer ah oo ah barnaamij adeeg u oggolaanaya suuqleydu inay abuuraan oo ay ku daabacaan fiidiyowga internetka. WeVideo waxay bixisaa xal fudud-loo-adeegsado, dhammaad-ilaa-dhammaad ah oo loogu talagalay cunista fiidiyowga, tafatirka fiidiyowga, daabacaadda fiidiyowga iyo maaraynta hantida fiidiyowga - dhammaantood daruuraha ku jira, lagana heli karo bog furaha shabakadda, kiniiniga ama aaladda moobaylka Fiidiyowyada la daabacay iyadoo la adeegsanayo WeVideo waa kuwo moobil ah. WeVideo for Business sidoo kale waxaa ku jira xalal mobilada loogu talagalay aaladaha Android iyo iOS si markaas suuqyadu ay u qabsadaan fiidiyowyo iyo